Zim opposition MDC's 19th anniversary celebrations | News24
Africa > Zimbabwe > Zim opposition MDC's 19th anniversary celebrations
Supporters of Zimbabwe's main opposition leader Nelson Chamisa of the Movement for Democratic Change (MDC) party cheer as they attend a rally to commemorate the 19th anniversary of the MDC at Gwanzura Stadium in Harare on October 27, 2018. - Chamisa claims to have won the July 30 presidential election. (Photo by Jekesai NJIKIZANA / AFP)
A supporter of Zimbabwe's main opposition leader Nelson Chamisa of the Movement for Democratic Change (MDC) party wears a shirt with an image of Zimbabwe's former prime minister Morgan Tsvangirai as supporters attend a rally to commemorate the 19th anniversary of the MDC at Gwanzura Stadium in Harare on October 27, 2018. - Chamisa claims to have won the July 30 presidential election. (Photo by Jekesai NJIKIZANA / AFP)
A supporter of Zimbabwe's main opposition leader Nelson Chamisa of the Movement for Democratic Change (MDC) party holds a poster reading 'Ed (Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa) not my president' as supporters attend a rally to commemorate the 19th anniversary of the MDC at Gwanzura Stadium in Harare on October 27, 2018. - Chamisa claims to have won the July 30 presidential election. (Photo by Jekesai NJIKIZANA / AFP)
A supporter of Zimbabwe's main opposition leader Nelson Chamisa of the Movement for Democratic Change (MDC) party holds the party's flag as supporters attend a rally to commemorate the 19th anniversary of the MDC at Gwanzura Stadium in Harare on October 27, 2018. - Chamisa claims to have won the July 30 presidential election. (Photo by Jekesai NJIKIZANA / AFP)
Zimbabwe's main opposition leader Nelson Chamisa (C) of the Movement for Democratic Change (MDC) party releases a dove during a rally to commemorate the 19th anniversary of the MDC at Gwanzura Stadium in Harare on October 27, 2018. - Chamisa claims to have won the July 30 presidential election. (Photo by Jekesai NJIKIZANA / AFP)
Supporters of Zimbabwe's main opposition leader Nelson Chamisa of the Movement for Democratic Change (MDC) party gather for a rally to commemorate the 19th anniversary of the MDC at Gwanzura Stadium in Harare on October 27, 2018. - Chamisa claims to have won the July 30 presidential election. (Photo by Jekesai NJIKIZANA / AFP)
Supporters of Zimbabwe's main opposition leader Nelson Chamisa of the Movement for Democratic Change (MDC) party attend a rally to commemorate the 19th anniversary of the MDC at Gwanzura Stadium in Harare on October 27, 2018. - Chamisa claims to have won the July 30 presidential election. (Photo by Jekesai NJIKIZANA / AFP)
Zimbabwe's main opposition leader Nelson Chamisa of the Movement for Democratic Change (MDC) party speaks during a rally to commemorate the 19th anniversary of the MDC at Gwanzura Stadium in Harare on October 27, 2018. - Chamisa claims to have won the July 30 presidential election. (Photo by Jekesai NJIKIZANA / AFP)
Zimbabwe's main opposition leader Nelson Chamisa of the Movement for Democratic Change (MDC) party holds a young supporter during a rally to commemorate the 19th anniversary of the MDC at Gwanzura Stadium in Harare on October 27, 2018. - Chamisa claims to have won the July 30 presidential election. (Photo by Jekesai NJIKIZANA / AFP)
Zimbabwe's main opposition leader Nelson Chamisa of the Movement for Democratic Change (MDC) party arrives to attend a rally to commemorate the 19th anniversary of the MDC at Gwanzura Stadium in Harare on October 27, 2018. - Chamisa claims to have won the July 30 presidential election. (Photo by Jekesai NJIKIZANA / AFP)